Imipramine (အင်မီပရာမင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Imipramine (အင်မီပရာမင်း)
Imipramine (အင်မီပရာမင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Imipramine (အင်မီပရာမင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Imipramine (အင်မီပရာမင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Imipramine ကို စိတ်ကျရောဂါကုဖို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ ကလေးတွေ ညအချိန်အိပ်ယာထဲ ဆီးသွားခြင်းအတွက် ကုသရာမှာလည်း အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီဆေးကိုအသုံးပြုကုသရင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီး အိပ်ပျော်စားဝင်စေပါတယ်။ စွမ်းအင်များပြန်လည်ပြည့်ဝလာပြီး မိမိရဲ့နေ့စဉ် ကိစ္စများကို ပြန်လည်စိတ်ဝင်စားလာစေပါတယ်။ ကလေးများ အိပ်ရာထဲဆီးသွားခြင်းကို ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပါတယ်။
Imipramine ဟာ tricyclic အမျိုးအစား စိတ်ကျကုသဆေးထဲ ပါဝင်ပါတယ်။ Norepinephrine လို ဦးနှောက်ထဲက သဘာဝဓါတ်ပစ္စည်းများကို ဟန်ချက်ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ အိပ်ရာထဲဆီးသွားခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ဆီးအိမ်အပေါ် သက်ရောက်တဲ့ acetycholine ဓါတ်ပစ္စည်းကို ဟန့်တားနိုင်ပါတယ်။
Imipramine (အင်မီပရာမင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
သောက်ဆေးအနေနဲ့ အစာနဲ့ဖြစ်စေ၊ အစာမပါဘဲဖြစ်စေ တနေ့ကို ၁-၄ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်း သောက်ပေးရပါမယ်။ နေ့ခင်းဘက် အိပ်ငိုက်နေတတ်ရင် ညအိပ်ရာဝင်ချိန်တကြိမ်ပဲ သောက်ရပါတယ်။ ဆေးပမာဏဟာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ ကုသမှုအပေါ် တုံ့ပြန်ခြင်း စတာတွေအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်ပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို လျှော့ချနိုင်အောင် ဆရာဝန်ဟာ ဆေးကိုနည်းနည်းကနေ တဖြည်းဖြည်းတိုးသောက်သွားဖို့ ညွှန်ပါလိမ့်မယ်။
ကလေးတွေမှာ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အိပ်ရာမဝင်ခင် တနာရီကြိုသောက်ရပါမယ်။ ညအစောပိုင်းမှာ ဆီးသွားရင် ဆေးကိုအကြိမ်ခွဲပြီး (မွန်းလွဲပိုင်းတကြိမ် ညဘက်တကြိမ်) စောစောပေးရပါမယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်း သေချာလိုက်နာပါ။ ညွှန်ထားတဲ့ ပမာဏထက် ပိုသောက်ခြင်း၊ လျှော့သောက်ခြင်း၊ မကြာခဏသောက်ခြင်း မပြုပါနဲ့။ မြန်မြန်မသက်သာတဲ့အပြင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ တိုးလာနိုင်ပါတယ်။ အာနိသင်အကောင်းဆုံးရအောင် အချိန်မှန်သောက်သုံးပါ။ မှတ်မိလွယ်အောင် နေ့စဉ် အချိန်တူညီစွာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
ဒီဆေးကြောင့်ချက်ချင်းတော့ မသက်သာနိုင်ပါဘူး။ စိတ်ကျခြင်းအတွက် သောက်ရတယ်ဆိုရင် အာနိသင်အပြည့်အဝရဖို့ ၃ပတ်လောက် စောင့်ရပါတယ်။ သက်သာလာတယ်ထင်ရင်တောင် ဆေးကို ညွှန်ထားတဲ့အတိုင်း ဆက်သောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဆရာဝန်မညွှန်ကြားဘဲ ဆေးကို ရုတ်တရက်ရပ်ပစ်ခြင်း မပြုပါနဲ့။ ဆေးကို ရုတ်တရက်ဖြတ်ခြင်းဟာ အခြေအနေပိုဆိုးသွားစေပါတယ်။ ဆေးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့ပြီးမှ ရပ်ရပါတယ်။
ကလေးများ အိပ်ရာထဲ ဆီးသွားခြင်းအတွက် အချိန်တိုးမြှင့်သော်ကရတယ်ဆိုရင်လည်း ဆေးကို ပမာဏအမျိုးမျိုးပြောင်းသောက်သွားဖို့ လိုပါတယ်။ ဆေးကို ဘယ်လိုရပ်ရမယ်ဆိုတာလည်း ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ရပါမယ်။
အခြေအနေ မသက်သာရင်၊ ပိုဆိုးလာရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Imipramine (အင်မီပရာမင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Imipramineကို အခန်းအပူချိန်မှာ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိတွေ့အောင်၊ စိုစွတ်မှု မရှိအောင် သိမ်းဆည်းတာဟာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင် ပျက်ပြယ်ခြင်း၊ ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းခြင်း မဖြစ်ရအောင် ရေချိုးခန်းတွင်း သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုရပါ။ Imipramineဆေးအမျိုးအစား၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းခြင်းမျိုးကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးများအားလုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Azathioprine ကို အိမ်သာတွင်းထဲ ပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်း မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးတွေကို မလိုအပ်တော့ရင်၊ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားရင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ ဘယ်လို စွန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတာကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Imipramine (အင်မီပရာမင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Imipramineမသုံးစွဲခင်မှာ သူနဲ့ဓါတ်မတည့်တာရှိရင်၊ တခြား tricyclic ဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်းတွေရှိရင်၊ တခြားဓါတ်မတည့်တာရှိရင် ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ဖွင့်ပြောပါ။ ဒီပစ္စည်းမှာ ဓါတ်မတည့်ခြင်းနဲ့ တခြားပြသနာတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ပိုသိရအောင် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
ရောဂါတချို့ရှိရင် ဒီဆေးကို မသုံးရပါဘူး။ နှလုံးထိခိုက်မှုဖြစ်ဖူးရင် ဒီဆေးကိုမသုံးခင်မှာ ဆရာဝန်ကို ဖွင့်ပြောပါ။
ဆေးမသုံးခင်မှာ မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေးရာဇဝင်ကို (အထူးသဖြင့် ရင်ကျပ်ပန်းနာ၊ နာတာရှည်အဆုတ်ရောင်ခြင်း စတဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပြသနာများ၊ ရေတိမ်ဖြစ်ဖူးခြင်း၊ bulimia (ခေါ်) အစားအသောက်ဆိုင်ရာပြသနာ၊ ဆီးချို၊ နှလုံးရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ မိမိကိုယ်တိုင်/မိသားစုတွင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြနာဖြစ်ခြင်း၊ အတက်ရောဂါ၊ သိုင်းရွိုက်အလွန်အကျွံ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ဆီးသွားရခက်ခြင်း၊ အတက်ရောဂါမြင့်စေနိုင်သော အရက်သောက်ခြင်း၊ ဆေးစွဲခြင်း၊ ဦးနှောက်ထိခိုက်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ အကျိတ်အမျိုးအစားအချို့ စတာတွေရှိနေရင်) ဆရာဝန် (သို့) သူနာပြုကို ဖွင့်ပြောပါ။
Imipramine ဟာ နှလုံးခုန်စည်းချက်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ ပုံမှန်မခုန်ခြင်းနဲ့ ဆေးကုသမှုခံယူဖို့ လိုအပ်တဲ့တခြားပြသနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အီးစီဂျီမှာ QT ပမာဏကို ရှည်လျားစွာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအခြေအနေကို တခြားရောဂါများ၊ ဆေးဝါးများကြောင့်လည်း ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Imipramine မသောက်ခင်မှာ လက်ရှိသောက်နေတဲ့ ဆေးဝါးများနဲ့ ရောဂါတချို့ (နှလုံးချို့ယွင်းခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှေးခြင်း၊ QT ပမာဏရှည်ခြင်း၊ မိသားစုဝင်တွင်း အဆိုပါပြသနာများရှိခြင်း) ရှိရင် ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ဖွင့်ပြောပါ။
သွေးထဲမှာ ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်ကျဆင်းခြင်းဟာလည်း QT ပမာဏ ရှာ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆီးဆေးတွေသောက်နေရရင်၊ ချွေးထွက်များရင်၊ ဝမ်းပျက်ရင်၊ ပျို့အန်ရင်လည်း အဲဒီအခြေအနေကို ကြုံနိုင်ပါတယ်။ Imipramine ကို ဘေးကင်းစိတ်ချရအောင် ဘယ်လိုသုံးစွဲရမယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ဒီဆေးဟာ မူးဝေခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံဝါးခြင်းတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အရက်နဲ့ဆေးခြောက် သုံးစွဲရင် အဲဒီပြသနာတွေကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ကားမောင်းခြင်း၊ စက်ယန္တရားများမောင်းနှင်ခြင်း၊ နိုးကြားဖို့ အမြင်အာရုံကောင်းဖို့လိုအပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ အရက်မသောက်ပါနဲ့။ ဆေးခြောက်သုံးနေရင် ဆရာဝန်ကို ဖွင့်ပြောပါ။
မူးဝေသတိလစ်ခြင်းမဖြစ်အောင် ထိုင်နေလှဲနေရာက ထရင် ဖြည်းဖြည်းပဲထပါ။
ဒီဆေးဟာ နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ပိုမိုခံရစေပါတယ်။ နေရောင်အောက် သိပ်မထွက်ပါနဲ့။ အသာအရေညိုအောင် tanning booth, sunlamp သုံးခြင်းများ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အပြင်ထွက်ရင် အကာအကွယ်များ ဝတ်ဆင်ပါ။ နေလောင်ခြင်း၊ အရေကြည်ဖုပေါက်ခြင်း၊ အသားအရေနီခြင်းများဖြစ်ရင် ဆရာဝန်ကိုဖွင့်ပြောပါ။ ဆီးချိုရှိနေရင် ဒီဆေးသောက်တဲ့အခါ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို ထိန်းချုပ်ရ ခက်ခဲစေပါတယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်း ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။ ရေငတ်ခြင်း၊ ဆီးသွားများခြင်းများ ဖြစ်လာရင် ဆရာဝန်ကို ဖွင့်ပြောပါ။ ဆီးချိုဆေး၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ စားသောက်ပုံ စတာတွေကို ပြောင်းလဲချိန်ညှိဖို့ လိုပါတယ်။
သက်ကြီးပိုင်းတွေဟာ ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို ပိုခံစားရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မူးဝေခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲခြင်း၊ နှလုံးပြသနာများ စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပြသနာတွေရှိရင် အမြင့်ကပြုတ်ကျနိုင်ခြေ များပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေချိန်မှာ တကယ်လိုအပ်မှသာ သုံးသင့်ပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဒီဆေးသုံးစွဲရင် မွေးလာတဲ့ကလေးမှာ ဆီးသွားရန်ခက်ခြင်း၊ အချိန်ကြာကြာအိပ်ခြင်း၊ တုန်ခြင်း၊ တက်ခြင်း တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကို သိရအောင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသနာများဟာ မကုသဘဲထားရင် ဆိုးရွားလာနိုင်တာမို့ ဆရာဝန်မရပ်ခိုင်းဘဲ ဆေးကိုမရပ်ပါနဲ့။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ စိတ်ကူးရှိရင် ဒီဆေးရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကို သိရအောင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ဒီဆေးဟာ မိခင်နို့ထဲကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီး ကလေးကိုထိခိုက်စေတတ်ပါဘူး။ ဆေးသုံးနေချိန် မိခင်နို့တိုက်ရတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Imipramine (အင်မီပရာမင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Imipramineကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နဲ့ ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ အသုံးပြုရင် ဆိုးကျိုးတွေ ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာ စမ်းသပ်ချက်တွေ မရှိပါဘူး။ ဆေးမသောက်သုံးခင်မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ကောင်းကျိုးများနဲ့ ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Imipramineဆေးဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များမှာ ထိခိုက်နိုင်ခြေအဆင့် N ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။)အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များမှာ ထိခိုက်နိုင်ခြေ အဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Imipramine (အင်မီပရာမင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊ အမြင်ေဝဝါးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ အစားပျက်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တိုး/ကျခြင်း၊ ချွေးထွက်များခြင်း စတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလက္ခဏာတွေ ပျောက်မသွားရင်၊ ပိုဆိုးသွားရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်အနေနဲ့ ဒီဆေးကို ပေးရခြင်းဟာ ဆိုးကျိုးထက် ကောင်းကျိုးက ပိုများတယ်လို့ ယူဆလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးသုံးသူအများစုမှာ ဆိုးရွားတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ မကြုံရပါဘူး။ ဆိုးရွားတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရင်သားကြီးပြီးနာခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ နို့ရည်များထွက်လာခြင်း၊ ဓမ္မတာပုံမမှန်ခြင်း ဓမ္မတာလာစဉ်နာခြင်း၊ ကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ခြင်း၊ နားအူခြင်း၊ လိင်မှုဆိုင်ရာပြသနာများ၊ ခြေတုန်လက်တုန်ဖြစ်ခြင်း၊ ခြေလက်များ ထုံကျင်ခြင်း၊ နီရဲရောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်း၊ ဆီးသွားရခက်ခြင်း စတာတွေကြုံရရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
ရှားပါးပေမယ့် ဆိုးရွားတဲ့ပြသနာတွေဖြစ်တဲ့ သွေးခြေဥလွယ် သွေးထွက်လွယ်ခြင်း၊ ရောဂါပိုးဝင်သည့် လက္ခဏာများ၊ အစာအိမ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အောင့်ခြင်း၊ ဆီးမည်းခြင်း၊ မျက်လုံးနှင့်အသားဝါခြင်း စတာတွေကြုံရရင် ဆရာဝန်ချက်ချင်းပြပါ။
ဒီဆေးဟာ ရှားပါးပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့ (သေဆုံးနိုင်တဲ့) ဆီရိုတိုနင်ရောဂါလက္ခဏာစု/ အဆိပ်သင့်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆီရိုတိုနင်မြင့်တက်စေတဲ့ ဆေးဝါးတွေသုံးစွဲရင် ဆရာဝန်ကို ဖွင့်ပြောပါ။ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ အာရုံခြောက်ခြားခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓါအစိတ်အပိုင်းများ ညှိနှိုင်းမလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ဆိုးရွားစာမူးဝေခြင်း၊ ဆိုးရွားစွာ ပျို့အန်ခြင်း ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ကြွက်သားများ အကြောဆွဲခြင်း၊ အကြောင်းအရင်းမသိရဘဲ ဖျားနာခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ခြင်း စတာတွေဖြစ်ရင် ဆေးကုသမှု ချက်ချင်း ခံယူပါ။
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ နှလုံးပုံမှန်မခုန်ခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ စကားမပီခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ်တဖက်ခြမ်း အားနည်းခြင်း၊ မျက်စိအောင့်ခြင်း ရောင်ခြင်း နီရဲခြင်း၊ သူငယ်အိမ်ကျယ်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံပြောင်းလဲခြင်း စတာတွေကြုံရရင် ဆေးကုသမုချက်ချင်းခံယူပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Imipramine (အင်မီပရာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဒီဆေးနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိတဲ့ ဆေးတွေကတော့ anticholinergics ဆေးများ (ဥပမာ atropine, belladonna alkaloids, scopolamine, benztropine ကဲ့သို့ Parkinson ရောဂါအတွက်ဆေးများ), သွေးကျဆေးအချို့ (ဥပမာ, clonidine, guanadrel, guanethidine, reserpine), digoxin, disopyramide, thyroid supplements, valproic acid.
MAOI အုပ်စုဝင်ဆေးတွေကို imipramine နဲ့ ပေါင်းစပ်သောက်သုံးခြင်းဟာ ဆိုးရွားတဲ့ (သေစေနိုင်လောက်တဲ့) ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ ကြုံနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးသုံးစွဲနေချိန်မှာ MAOI အုပ်စုဝင်ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ isocarboxazid, linezolid, methylene blue, moclobemide, phenelzine, procarbazine, rasagiline, safinamide, selegiline, tranylcypromine စတာတွေကို မသောက်ပါနဲ့။ imipramine မသုံးစွဲခင် ၂ပတ်ကြိုပြီး ဒါမှမဟုတ် သုံးစွဲပြီးနောက်ပိုင်း ၂ပတ်နေမှ သုံးစွဲပါ။ ဆေးတွေကို ဘယ်အချိန်မှာ စတင်သုံးစွဲပြီး ဘယ်အချိန်မှာ ရပ်ရမယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ဆီရိုတိုနင်ရောဂါစု/အဆိပ်သင့်ခြင်းဟာ ဆီရိုတိုနင်မြင့်မားစေတဲ့ ဆေးဝါးတွေကို သုံးစွဲနေချိန်မှာ ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ MDMA/” ecstasy,” St. John’s wort, စိတ်ကျကုသဆေးအချို့ (fluoxetine/paroxetine ကဲ့သို့ SSRIဆေးများ, duloxetine/venlafaxine ကဲ့သို့ SNRIဆေးများ) စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးဝါးအချို့ဟာ imipramine ကို ကိုယ်ခန္ဓါထဲကနေ စွန့်ထုတ်ဖို့လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ဥပမာ phenobarbital ကဲ့သို့ စိတ်ငြိမ်ဆေးများ, cimetidine, cisapride, haloperidol, နှလုံးစည်းချက် ပြသနာအတွက် ပေးသောဆေးများ (flecainide, propafenone), halofantrine, certain HIV protease inhibitors (fosamprenavir), phenothiazines (thioridazine), pimozide, အတက်ကျဆေး (phenytoin), terbinafine, trazodone စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Imipramine အပြင် amiodarone, dofetilide, pimozide, procainamide, quinidine, sotalol, macrolide အမျိုးအစား ပဋိဇီဝဆေးများ (ဥပမာ erythromycin), sparfloxacin စတာတွေဟာ QT ပမာဏ ရှည်လျားခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် imipramine မသုံးစွဲခင်မှာ မိမိသုံးစွဲနေတဲ့ ဆေးဝါးအားလုံးကို ဆရာဝန်ဆီမှာ ဖွင့်ပြောဖို့ လိုပါတယ်။
အိပ်ငိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အရက်၊ ဆေးခြောက်၊ ဟ်စ်တမင်း ဆန့်ကျင်ဆေးများ (cetirizine, diphenhydramine), စိတ်ငြိမ်ဆေး အိပ်ဆေးများ (alprazolam, diazepam, zolpidem), ကြွက်သားများ တောင့်တင်းမှုလျော့စေသော ဆေးများ (carisoprodol, cyclobenzaprine), မူးယစ်ဆေးပါသော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ (codeine, hydrocodone) စတာတွေကို သုံးစွဲနေရင် ဆရာဝန်ကို ဖွင့်ပြောပါ။
သုံးစွဲနေတဲ့ ဆေးဝါးအားလုံး(ဥပမာ အအေးမိ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး) ရဲ့ အညွှန်းစာတွေကို သေချာဖတ်ပါ။ အိပ်ငိုက်စေတဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်တတ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နှာပိတ်ခြင်းကို သက်သာစေတဲ့ဆေးတွေဟာလည်း နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိခိုက်စေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ ဒီဆေးရဲ့ သွေးအတွင်းပါဝင်မှု ပမာဏကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တတ်ရင်၊ မကြာမီကမှ ဆေးလိပ်ဖြတ်ထားရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
Imipramine ဟာ desipramine နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ desipramine ပါတဲ့ ဆေးတွေကို သောက်သုံးနေချိန်မှာ imipramine ကို မသုံးစွဲပါနဲ့။
imipramineဟာ သင်ယခု သောက်သုံးနေတဲ့ တခြားဆေးဝါးများနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးအားလုံး စာရင်း လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်ရာတွင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသော၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသော၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်) ဆရာဝန် (သို့်) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက် မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကို ပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Imipramine (အင်မီပရာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
imipramineဟာ အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှု ပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်မလာစေဖို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ခြေရှိမရှိ မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Imipramine (အင်မီပရာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Imipramineဟာ သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Imipramine (အင်မီပရာမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
စစချင်းမှာ ၁၀၀ မီလီဂရမ်ကို တနေ့တကြိမ်သောက်ပြီး လိုအပ်ရင် ၂၀၀ မီလီဂရမ်ထိ မြှင့်သွားနိုင်ပါတယ်။
၂၀၀ မီလီဂရမ်ထိ တိုးမြှင့်ပြီး ၂ပတ်နေတဲ့အထိ ထိရောက်မှုမရှိရင် တနေ့ကို ၂၅၀-၅၀၀ မီလီဂရမ်ထိ တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။
ဆက်လက်သောက်သုံးရမယ့် ပမာဏကတော့ တနေ့ကို ၁၀၀-၂၀၀ မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
အများဆုံး တနေ့မှာ ၃၀၀ မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
စစချင်းမှာ ၇၅ မီလီဂရမ်ကို တနေ့တကြိမ် သောက်ရပါတယ်။
ဆက်လက်သောက်သုံးရမယ့် ပမာဏကတော့ တနေ့ကို ၅၀-၁၅၀ မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
အများဆုံး တနေ့မှာ၂၀၀ မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
စစချင်းမှာ ၁၀၀-၁၅၀ မီလီဂရမ်ကို တနေ့တကြိမ် သောက်ပြီး လိုအပ်ရင် ၂၀၀ မီလီဂရမ်ထိ မြှင့်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဆက်လက်သောက်သုံးရမယ့် ပမာဏကတော့ တနေ့ကို ၇၅-၁၅၀ မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
အာနိသင်ပြဖို့ ၁-၃ ပတ်ခန့် စောင့်ရတတ်ပါတယ်။
တခြားစိတ်ကျခြင်းတွေထက်စာရင် အတွင်းပိုင်းစိတ်ကျ ဝေဒနာမှာ ပိုမိုထိရောက်ပါတယ်။
အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ (ဒါမှမဟုတ်) တနေ့လုံးမှာ အကြိမ်ရေခွဲပြီး သောက်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးအာနိသင်အပြည့်အဝမရသေးခင် ဆေးကိုရပ်လိုက်လို့ ရောဂါပြန်ဖြစ်တဲ့အခါ ထိရောက်တဲ့အာနိသင်ပြန်ရအောင် သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
စစချင်းမှာ ၃၀-၄၀ မီလီဂရမ်ကို တနေ့တကြိမ် သောက်နိုင်ပါတယ်။
အများဆုံး တနေ့မှာ ၁၀၀ မီလီဂရမ် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
စစချင်းမှာ ၂၅-၅၀ မီလီဂရမ်ကို တနေ့တကြိမ် သောက်နိုင်ပါတယ်။
နေ့စဉ် ပမာဏဟာ ၇၅မီလီဂရမ်နဲ့ အထက်ဆိုရင် ဆေးတောင်ပသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
အတော်အသင့် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုအတွက်တော့ အချက်အလက်တွေ မသိပါဘူး။ ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးသူတွေမှာတော့ သတိပြုသုံးစွဲရပါတယ်။
အတော်အသင့် အသည်းပျက်စီးမှုအတွက်တော့ အချက်အလက်တွေ မသိပါဘူး။ ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးသူတွေမှာတော့ သတိပြုသုံးစွဲရပါတယ်။
Imipramine သောက်နေစဉ်မှာ MAOI အုပ်စုဝင်ဆေးတွေပါ သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် ကြားထဲမှာ ၁၄ရက်လောက်ခွာပြီးမှ သုံးစွဲရပါမယ်။ MAOI ဆေးများသုံးနေရင်လည်း ၁၄ရက်လောက်ခြားပြီးမှ Imipramine ကို သုံးရပါမယ်။
အခြား MAOI ဆေးများသုံးစွဲခြင်းအတွက် (ဥပမာ IV methylene blue, linezolid)
မိမိဖာသာ စတင်သုံးစွဲခြင်းကို ရှောင်ပါ။ အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ သုံးစွဲဖို့လိုလာရင် နားလည်တတ်ကျွမ်းသူများရဲ့ အကူအညီယူပါ။
အရင်ကသုံးစွဲနေတယ်ဆိုရင်လည်း တခြားရွေးချယ်စရာ နည်းလမ်းမရှိရင်၊ ဖြစ်နိုင်ခြေအကျိုးကျေးဇူးဟာ ဆိုးကျိုး (ဆီရိုတိုနင်ရောဂါလက္ခဏာစု)ထက် ပိုများနေရင် ဒီဆေးကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး linezolid ဒါမှမဟုတ် IV methylene blue ကို သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
လူနာများကို ဆီရိုတိုနင်ရောဂါလက္ခဏာစု ရှိမရှိ ၂ပတ်ခန့် စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ် MAOI ဆေးပေးပြီး ၂၄နာရီတိုင်အောင် စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။
ဒီဆေးကို MAOI နောက်ဆုံးအကြိမ်ပေးပြီး ၂၄နာရီကြာရင် ပြန်ပြီး စတင်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
Neutrophil အရေအတွက်ကျဆင်းလာရင်တော့ ဆေးကိုရပ်ရပါမယ်။
non-IV methylene blue ပုံစံနဲ့ တခြားအကြောဆေးတွေကို ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ကီလိုမှာ ၁မီလီဂရမ်အောက် သုံးစွဲတဲ့အခါ ဆီရိုတိုနင်ရောဂါစု ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ မသိရသေးပါဘူး။
နှလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ သွေးပေါင်ချိန်၊ နှလုံးအလုပ်လုပ်ပုံ စတာတွေကို စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးပိုင်းတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးဆဲလ်များပမာဏ၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းရှိမရှိ၊ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ပမာဏ စတာတွေကိုလည်း စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ လူနာမှာ သေကြောင်းကြံစည်လိုစိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရှိမရှိလည်း စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။
လူနာများအနေနဲ့ ဒီဆေးကို သုံးနေရတယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ ဆရာဝန်၊ သွားဆရာဝန် စသူတွေကို ဖွင့်ပြောထားဖို့ လိုပါတယ်။
ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့ဆေး၊ မညွှန်ဘဲသောက်သုံးနိုင်တဲ့ဆေး အပါအဝင် သုံးစွဲနေတဲ့ဆေးအားလုံးကို ပြောပြထားရပါမယ်။
ဒီဆေးဟာ မိမိကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံစည်လိုစိတ်တွေ ဝင်လာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ စိတ်ကျခြင်းအခြေအနေတွေ ပိုဆိုးလာရင်၊ စိတ်ပိုင်း အမူအကျင့်ပိုင်း ပြောင်းလဲမှုရှိရင်၊ မိမိကိုယ်ကို အန္တရာယ်ပြုလိုစိတ်တွေပေါ်လာရင် အရေးပေါ် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို ချက်ချင်း အကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်လိုရင်၊ ကလေးနို့တိုက်နေရင် ဆရာဝန်များကို ပြောပြပါ။
ဒီဆေးဟာ တွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ လှုပ်ရှားမှုစွမ်းရည်များကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးရဲ့အာနိသင်အပြည့်မပြသေးခင်မှာ ကားမောင်းခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ စက်ယန္တရားမောင်းနှင်ခြင်းများ မပြုပါနဲ့။
ကလေးတွေအတွက် Imipramine (အင်မီပရာမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၆နှစ်မှ ၁၂နှစ်
စစချင်းမှာ ၂၅ မီလီဂရမ်ကို တနေ့တကြိမ် သောက်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ၅၀ မီလီဂရမ် တနေ့ကိုတကြိမ် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
အများဆုံး တနေ့မှာ ကိုယ်အလေးချိန်တစ်ကီလိုကို ၂.၅မီလီဂရမ် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ၇၅ မီလီဂရမ် တနေ့ကိုတကြိမ် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
အများဆုံး တနေ့မှာ ကိုယ်အလေးချိန်တစ်ကီလိုကို ၂.၅ မီလီဂရမ် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
နေ့ပိုင်းမှာ ဆီးမကြာခဏသွားသူတွေမှာ voiding cystourethrography နဲ့ cystoscopy စတဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ဖို့ လိုနိုင်ပါတယ်။
ဆက်တိုက်ကုသသွားရင် ထိရောက်မှု ကျဆင်းတတ်ပါတယ်။
အိပ်ရာဝင်ချိန် စောစိးစွာ ဆီးသွားတတ်သူတွေမှာ ပိုပြီး စောပေးတာမျိုး၊ ခွဲပေးတာမျိုး ဥပမာ မွန်းလွဲချိန်မှာ ၂၅မီလီဂရမ်နဲ့ အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ နောက်ထပ်ပေးတာမျိုး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
လေးများမှာ အခြားသော ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ မကြာခဏဆီးသွားခြင်းကို ကုသဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။
Imipramine (အင်မီပရာမင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Imipramineကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများ၊အချိုးအစားများနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်
Imipramineဆေးကို သုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံး သုံးစွဲပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ကြိမ် သုံးစွဲရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်လွတ်သွားတဲ့ အကြိမ်ကို ကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာသာ သုံးစွဲပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသုံးစွဲခြင်း မလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင် 24, 2019
Imipramine Dosage. https://www.drugs.com/dosage/imipramine.html. Accessed February 23, 2018.
Imipramine Hcl. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-8664/imipramine-oral/details. Accessed February 23, 2018.
ပြေးလွှားခြင်းဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သလား?